Maleeshiyaad dad Shacab ah ku diley Gobolka Galgaduud * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
ImageAf SoomaaliAfricaSomaliaWorld news
By Ardaan Yare	 On Nov 17, 2019
Inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa gteeriyooday mid kalena waa uu dhaawacmay,adkib markii Maleeshiyaad hubeysan ay rasaas ku fureen Dhalinyaro wada fadhiday hal goo boo ku taalla deegaanka Balli howd ee duleedka degmada Guriceel.
Qofka dhintay iyo midka dhaawacmay ayaa waxaa ay kamid ahaayeen dhalinyarada la rasaaseeyey,waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in maleeshiyaadka falkaasi geystay ay goobta ka baxsadeen.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in dilka iyo dhaawaca dadka Shacabka ah uu la xiriiro aanooyin qabiil oo bilihii la soo dhaafay ay kajiray deegaano katirsan Gobolka Galgaduud ee Dowlad Goboleedka Galmudug.
Horay ayaa waxaa deeganka Balihowd ee duleedka Guriceel waxaa loogu dilay Saddex Ruux oo dadka deegaankaas kamid ahaa,waxaana arrintaasi xal ka gaaray Maamulka deegaanka iyo Odayaasha Dhaqanka Gobolka Galgaduud.
Soomaaliya ayaa waxaa ay kamid tahay meelaha ugu badan ay ka jiraan dagaal beeleedyada soo lab laabtay,hayeeshee Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay badi ku guuleysatay inay xal ka gaarto.
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho
Sawirro: Agaasimaha Madaxtooyada Mudane Cabdisaciid Muuse oo…
Diiwaan-gelinta Musharaxiinta Aqalka Sare ee Hirshabeelle oo…
Villa Somalia: Shir xasaasi ah oo uga socda Rooble iyo…
Aqoonyahay Cabdiwahaab oo taageersanaa Farmaajo oo la…
Madaxweyne Deni “Ciidamada waxaan uga digay inay ku milmaan…
Midowga Musharaxiinta oo eedeymo culus u jeediyay Farmaajo…
DEG DEG: Liiska murashaxiinta Aqalka sare Hirshabelle oo la…
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku eedeeyay Farmaajo inuu…
Farmaajo oo u magacaabay Fahad Yaasiin La taliyaha Amniga…
RW Rooble;”Cid cid u istaageysa ma jirto horaa loo soconayaa…
Deg Deg: Beesha Caalamka oo war ka soo saartay Kiiska Ikraan…
Wararkii ugu dambeeyay maleeshiyo beeleed ku dagaalamay…
Puntland oo Ra’isul Wasaare Rooble garab istaagtay kana…
Ra’isul Wasaare Rooble oo amray in baaris deg deg ah lagu…
General Xijaar oo uga digay Taliyeyasha saldhigyada Gobalka…
Golaha Midowga Musharaxiinta oo garab istaagay Ra’isul…
Jubbaland oo ka hadashay xilka qaadista lagu sameeyay Fahad…
Rooble oo shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yaasiin iyo…
Cabdi Xaashi yo Mahdi Guuleed oo heshiis ku gaaray magaalada…